Phenotype 002 Jijin - Joornaalka Naqshadeynta
Talaado 25 Bisha Koobaad 2022
Jijin Foomka 'Phenotype 002 jijin' waa natiijada ka timaadda jilitaanka dhijitaalka ah ee koritaanka noolaha. Qaaciddada algorithm ee loo isticmaalo geedi socodka hal abuurka waxay u oggolaaneysaa ku dayashada dabeecadda qaab dhismeedka noolaha abuurista qaabab dabiici ah oo aan caadi aheyn, gaarista quruxda aan loo kala harin mahadnaqa qaab dhismeedka ugu fiican iyo daacadnimada wax. Tusaalaha ayaa lagu soo rogay iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada daabacaadda 3D. Marxaladda ugu dambeysa, gabal dahabka ah ayaa gacanta lagu geliyaa naxaas, waa la miiray oo dhammeystirran si taxadar leh.
Magaca mashruuca : Phenotype 002, Magaca naqshadeeyayaasha : Maciej Nisztuk, Magaca macmiilka : In Silico.
Axad 23 Bisha Koobaad 2022
Generative, algorithmic iyo naqshadeynta salka
Jijin Maciej Nisztuk Phenotype 002